Umvelisi wezinto zokuncedisa impilo - i-Wisepowder malunga
- inkampani yabucala
I-Wisepowder ijolise kuphando, ukuvelisa kunye nokuvelisa izixhobo ezingafunekiyo ze-nootropics, izongezo zesondlo kunye nezithako zamayeza. Singumvelisi onamava kunye namava kunye nomthengisi.
I-Wisepowder yinkampani eyaziwayo neyaziwayo neyaziwayo enamava angaphezu kweminyaka engama-20 yamava kwishishini lesondlo laseTshayina. Kwaye, okwangoku, yonke imveliso yezithako inenkqubo yokulawula umgangatho esemgangathweni ngokuhambelana ngqo nemigaqo ye-GMP. I-WISEPOWDER ibonelela ngeemveliso ezisemgangathweni. Kwaye, elinye iqela esisebenzisana nathi kwiindawo zase-US liza kubonelela ngenkonzo ezinxulumene nabathengi bethu kwihlabathi liphela.
I-Wisepowder iseke iziko elebhu elenzelwe izixhobo zangaphandle ezivela eJamani, eJapan nase-US zokuhlalutya kunye nokufakwa komxholo wezithako ezisebenzayo eziqinisekisa ukulawulwa kweWisepowder kuwo onke amabakala enkqubo yokuvelisa.
Iqonga leR & D
I-enzyme eyalelwa kwindalo
Iqonga le-Microbial Genome Editing
Iqonga le-testof Fermentation encinci
Uvavanyo oluncinci lweqonga elinamandla le-Enzyme
Uvavanyo oluncinci lwePlatifti yeMveliso yokuSusa
Uvavanyo lwenqwelomoya yeqonga lokuqina
Uvavanyo lwenqwelomoya yeqonga le-Enzyme
Uvavanyo lweenqwelomoya zePlatifom yokukhupha iimveliso
zingama-26 iingcali zebhayoloji enobuchule namava
Elebhu esebenza ngokuBambisana
ujoyine kwaye wakha intsebenziswano yexesha elide kunye neelebhu ezingama-89 kwihlabathi liphela
yasekwa ngo-1999. Emva kweminyaka engama-20 uphuhliso oluzinzileyo
Kunye nabasebenzi beqela abafundileyo abangama-112.
Rhumela kwincwadana yethu kwaye ubambe Fumana ixabiso!